Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Xaawa Maxamuud Cali oo la il Daran Xanuun aad u naxtin badan (Daawo Sawirada)
August 19 2017 01:01:09
Xaawa Maxamuud Cali oo la il Daran Xanuun aad u naxtin badan (Daawo Sawirada)
Xaawa Maxamuud Cali waa gabar ka soo jeedda qoys dan yara da’deedana tahay 2 sano & 8 bilood, waxaa ay ku nooshahay Xaafadda Madiina gaar ahaan Kaawa Godeey, waxey la ildarantahay xanuun aad u dhibaateeyay Isheeda Midig guud ahaan.
Xaawa waxa ay la nooshahay Hooyadeed & Aaabaheed oon tabar badan laheyn una awoodin iney gargaar caafimaad oo dibadda ah geystaan inanteeda yar oo muddo 5 bilood ku xanuunsaneysa Muqdisho.
Dhakhaatiirtii loo geeyay waxa ay sheegeen iney xaalad halis badan ku sugantahay inantan yari ayna u baahantahay in si deg deg ah loogu qaado dibadda si loo badbaadiyo xubnaha kale ee jirkeeda oo halis u yahay inuu ku faafo cudurkaan dhibaateeyay Isheeda Midig inanta.
Reerkan ayaa waxa ay lahaayeed saddex caruura waxaana xusid mudan iney ka geeriyoodeen labadii kale inantii u hartayna uu kuu dhacay xanuunkaan halista ba’an ku haaya Isheeda Midigta ah.
Sheekh Cabdi Xayi Sh Aadem Xassan oo ah gudoomiyaha guddiga gurmadka gabadhan yar ayaa ugu baaqay dhamaan bulshada soomaaliyeed iney garab siiyaan inantan yare e ku jirta xaaladda qatarta badan si loogu helo gargaar caafimaad oo dibadda ah.
Maxamuud Cali Shariif oo ah aabaha dhalay Xaawa ayaa sheegay inuusan ka quusanin in gabadhiisa loogu helo gargaar caafimaad si loola tacaalo xaaladeeda, isagoona codsi u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Waxii Faah Faahin ah kala Xariira Guddiga U gurmanaya Gabadhan Yar
Axmed Abshir Geedi oo laga helo 252615535508